रात्रिभोज चुनावको, कुरा तनावको « Jana Aastha News Online
रात्रिभोज चुनावको, कुरा तनावको
प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०७३, शुक्रबार १६:४९
‘गर्छु, मेरो काम चुनाव गराउने हो । म भन्छु र गर्छु पनि । तपाईं सप्तरीको, म पनि त्यहींको । सप्तरीको रगत कडा हुन्छ भन्ने थाहा छैन ? बोलेको कुरा पु¥याएर छाडिन्छ ।’
शुक्रबार राजधानीको जमलस्थित एल्लो प्यागोडा होटलमा रात्रिभोजसहित जुटेका संवैधानिक अंगसम्बद्ध पदाधिकारीहरुबीच चलेको तातो बहसको अंश हो यो । ठ्याक्कै पारिपट्टि बहादुुर भवनस्थित निर्वाचन आयोगका कमाण्डर अयोधीप्रसाद यादवलाई लोकसेवा आयोगका सदस्य अशोककुमार झा नेताले जसरी नबोल्न उपदेश दिँदै थिए । लाग्थ्यो, झा स्वयं संविधान संशोधन नगरी स्थानीय चुनावमा जानै हुँदैन भन्ने मधेसी मोर्चाका नेताको भाषा त बोलिराखेका छैनन् ? यसअघि लोकसेवा अध्यक्ष उमेश मैनालीले आफू गृहसचिव हुँदा ०६४ सालमा सम्पन्न गराएको पहिलो संविधानसभा चुनावको अनुभव सुनाएका थिए । उनले भने, ‘हुने हो कि नहुने हो भन्ने अन्योलबीच त्यो चुनाव गराइछाड्यौं ।
यस्ता चुनावमा भित्र–बाहिरबाट अनेकथरी थ्रेट आउँछन् ।’ यसैक्रममा हो, अझ हौसिँदै सुट–टाइमा ठाँटिएका उनका सदस्य झा पड्किएको । जसरी पनि निर्वाचन गराइछाड्ने यादवको प्रतिक्रियापछि उनी थान्को लाग्नासाथ लोकसेवाका अर्का सदस्य डा. गोविन्द कुसुमले पनि गृहसचिवको रुपमा कार्यरत रहँदाको अनुभूति बाँड्न भ्याए । भन्दै थिए, ‘सबैभन्दा पहिले ¥युमर म्यानेज्मेन्ट (हल्लाको व्यवस्थापन) तर्फ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ । मान्छे जिउँदै छ तर पुलिसको गोलीले म¥यो भन्दै कमजोर पक्षले हल्ला चलाउने र भीडलाई उत्तेजित पार्ने, उताको बुथ क्याप्चर भो भनेर अरुको ध्यान त्यता केन्द्रित गराई यता आफूले कब्जा गर्ने, धाँधलीको हल्ला मच्चाएर मतदान स्थगित गर्न राजनीतिक दबाब दिने ।’
कुसुमले दिएको अर्को सुझाव थियो, ‘नेपाल प्रहरीले तीन हजार जनालाई भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यति पदको निम्ति ८/९ हजार भिडेका छन् । त्यसको रिजल्ट रोकौं र ती सबैलाई आफ्नो गाउँ–ठाउँ नपर्ने गरी म्यादी प्रहरीको रुपमा चुनावमा खटाइदिऊँ । त्यसो गर्दा राम्रो ड्युटी गरेको आधारमा भर्ना हुन पाउने आशासहित तिनीहरु खटिन सक्छन् । नत्र म्यादी प्रहरी घाँडो हुने खतरा रहन्छ । नराम्रो ड्युटी गरे भोलि भर्नाको बाटो छेकिन्छ भनेर डराउने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा चुनाव असल प्रहरी छान्ने राम्रो अवसर पनि हो ।’
मैनालीले यसैमा थपे, ‘तपाईंहरुलाई सहयोग होस् भनेरै हामीले सबै परीक्षा सारिदिएका छौं ।’ अख्तियारकी सावित्री गुरुङले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार भयो भनेमात्र हामीले हेर्ने हो । त्यस्तो त नहोला कि !’ यसमै प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘चुनावमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउन दिन्नौं । ऐन–कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै काम हुने छैन ।’